Gcina iso le-Eagle endaweni yakho nokusungulwa ngamakhamera okuphepha!
Kuyikhulu lama-21 lapho ubugebengu bunjengecala lokudlwengulwa kanye nokuphanga kusezingeni eliphezulu kakhulu. Njalo ngonyaka izigidi zabantu, imindeni nezinhlangano zingama-Imenble ...
KungukuthiUmgama wamanjempumalangaIkhulu leminyaka lapho ubugebengu lunjengobugebengu nokuphanga kusezingeni eliphakeme kakhulu. Njalo ngonyaka izigidi zabantu, imindeni nezinhlangano zithinteka kakhulu ekugqekeleni, ukungena ngaphakathi, i-larceny neminye imisebenzi ye-villive. Lezi zinto ezingekho emthethweni ziholela ekulahlekelweni okukhulu ngokheshi, usongo empilweni, ukulimala kwempahla kanye nemiphumela emibi ekuziqhenyeni, udumo kanye nezimpilo zabantu.
Ukuze uhlale uphephile ekubeni yisisulu se-mastermund 'mastermund kanye nokuvikela impahla yakho endleleni embi yabantu abangagudlukanga, kuwukuhlakanipha ukuthola indawo yakho yasekhaya nehhovisi elivikelwe ngesixazululo esinamandla sokuphepha. Yize indlela engcono kakhulu yokuvikela impahla yakho kanye nabantu abanendaba ukuthi uzothola amasistimu wokuphepha athuthukile afakwe kwisikhungo sakho, uma ufuna ukwengeza isendlalelo esisodwa esimangalisayo sokuvikelwa kohlelo lwakho lokuphepha, ungacabangi kabili ekuxhumaneni umphakeli wekhamera.Ikhamera Yezokuphepha yilolo divayisi emangalisayo eqeda okushiwo 'isivikelo esibuwula'.
Ukubaluleka kwekhamera yezokuphepha:
Ucwaningo seluveze iqiniso lokuthi ukuthi ukufakwa okufanele kwamakhamera wokubhekisisa amakhamera anciphise kakhulu anciphisa kakhulu izinga lobugebengu endaweni! Ibeka abantu abanengqondo embi ukuthi bakhiphe uhlelo lwabo olungekho emthethweni.
Ake siqonde ukubaluleka kwekhamera yezokuphepha ngale ndlela uma ukweqa, ukuphanga noma elinye icala sekuvele, ukuqoshwa kwekhamera kungasiza abaphenyi kakhulu ukuthola abenzi bokubi futhi bawashise ngendlela abangasoze bacabanga ngakho Ephusheni ukwenza imibono yabo emibi.
Lesi yisizathu sokuthi amakhamera wokubheka ukubhekisisa asephenduke isidingo esihlanganayo seminyaka yanamuhla yobumnyama. Ngeke kube okungalungile ukusho ukuthi sekube ukufakwa okusemqoka ezindaweni eziphakeme zethrafikhi njengezakhiwo zomphakathi, izifunda zebhizinisi, ama-pop kanye nezitolo zemigwaqo, amanethiwekhi omgwaqo, imigwaqo engacabanga ngayo .
Lawa makhamera alungele ukuwasebenzisa hhayi kuphela ngomqondo wokuqothula abahlaseli futhi angeze ukuphepha okuphelele, kepha futhi balungele ukusebenzisa ngokwemibandela yokuqapha imisebenzi ngaphakathi kwekhaya noma ehhovisi lapho umninikhaya engaphandle kwe ukubona.
(Ikhamera ye-IP ye-LS Vision Wireless IP&I-NVR Recorder Isistimu ePeru - Umbono wobusuku)
(Umbono we-LSIkhamera engenantambo ye-WiFi IP ye-WiFi IP ENew Zealand)
Amaphuzu atholakalayo ngenkathi uyothenga ikhamera!
Uma usuvele wenza umqondo wakho ukwengeza ungqimba owengeziwe wokuvikelwa ohlelweni lwakho lokuphepha, enye into ebonakalayo evuselela ingqondo yakho ukuthi 'yini okufanele uyikhethe' nokuthi 'ongayithenga kuphi'.
* Yini okufanele uyikhethe?
Okukhethayo ukumane kuncike esikalini futhi usayizi wesikhala osihlose ukuba sibanjwe kwikhamera. Ngaphezu kwalokho, amakhono okuqopha nawo anendaba.
* Ikuphi ukuthenga?
Into ebaluleke kakhulu enquma isinqumo sakho ngumphakeli wekhamera yezokuphepha othembela kuyo ukwenza ukukhetha. Ululekwe kakhulu ukuthembela kumhlinzeki onokwethenjelwaUmbono we-LS Ukuze uthole ikhamera yakho yokubhekwa ukuze uthole isivumelwano esifanele esichitha kahle izidingo zakho, sincome isabelomali sakho futhi sikuvumele ujabulele ukuthula kwengqondo okuyigugu.
Ukuvikela izakhiwo zakho ngama-cam asezingeni eliphakeme kuzokunika ngokuqinisekile ukuphepha okudingeka kakhulu nangokwethukela! Ngakho-ke, sukuma uziphose lowo mqondo oqinile wokuvikelwa manje njengoba ubulindele!
PHAMBI Izizathu eziyishumi zokusebenzisa ikhamera ye-IP ekhaya lakho
Isikhathi Samahlaya - Ukuzijabulisa nje OLANDELAYO